Shucayb yare oo ka waramay sida ciidanka Muuse Biixi jeelka ugu tuureen - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shucayb yare oo ka waramay sida ciidanka Muuse Biixi jeelka ugu tuureen
Hal-abuurka da’da yar Shucayb ee xalay jeelka uu ku tuurey Muuse Biixi ayaa ka waramay sida wax u dhaceen. Kadib fadeexad ka raacdey caruurta uu jeelasha ku gurayo ayaa Muuse Biixi markiiba soo daayay. ”Waxay weliba ii iibiyeen jalaato mana jirin cid i garaacday ayuu yiri Shucayb yare oo ay ka muuqato diifta jeelka Muuse Biixi.
”Anoo wado maraaya ayaa askar roondo ku jirta i qabteen ma sheegin waxa sababay in jeelka loo taxaabo ama inay caadi tahay in dadka suuq iska maraya la iska qabto. Wey i raali geliyeen ayuu yiri Sucayb Yare.
Maaha markii ugu horeysay ee horjooge Muuse Biixi uu jeelka ku guro dadka fikirkooda ku cabiraya maamul xumadiisa. Waxaanu jeelka ka buuxiyay aqoonyahano, gabayaa, fanaaniin iyo dad bulshada xageeda muhiima.
Waxa sii batey askarta Ingiriisku u tababaray maamulka oo saq dhexe dadka guryaha ugu daadata kadibna argagax gelisa caruurta iyo haweenka. Waxa dacwad kadib Ingiriisku ka jaray mishaharkii uu siin jirey.
Waxaan ognahay in dhalintii la cabudhiyay ay horjooge Muuse dartii uga carareen gobolka.